dimanche, 18 décembre 2016 17:22
Ambinanindrano - Mahanoro : Eni-mianaka maty voatsatok’antsy tao anaty torimaso
Nitrangana vono olona feno habibiana tao Ankazotsifantatra, Kaominina Ambinanindrano, Distrika Mahanoro ny 10 desambra 2016. Enina mianaka nisy namono tao an-tranony tamin’ny tsindron’antsy tao anaty torimaso sy lamba firakotra, dia ramatoa iray 30 taona, sy ny zanany dimy mirahavavy eo anelanelan'ny 8 volana sy 10 taona. Tsy tao ny raim-pianakaviana fa any an-tsaha lavitra niasa tanimbary nanomboka ny 7 desambra 2016. 11 desambra 2016 no voamariky ny olona fa tsy hitahita izy ireo. Noho ny fofona mahery nivoaka avy ao amin’ny trano fonenan’izy ireo ren’ny olona ny 14 desambra vao nisy niantso Zandary, ka indrisy faty efa simba no hita tao. Nisy lehilahy iray ahiahiana ho nahavanon-doza noho izy efa namoaka vava noho ny ady misy aminy sy ity fianakaviana ity. Izy rahateo tsy hita nanjavonana.
mercredi, 14 décembre 2016 23:23
Arivonimamo : Nanolotra fitaovana ho an’ny Akanin’ny Zandarimariam-pirenena ny “La 19”
Tonga nanolotra fanomezana ho an’ny Akanin’ny Zandarimariam-pirenena Arivonimamo, “Centre de l’Orphélinat de la Gendarmerie Nationale” teo aloha ireo manamboninahitra avy amin’ny andiany faha-19 nivoaka tao amin’ny Akademia miaramila Antsirabe. Naneho firaisankina ny andiany izay ahitana ny antokon-tafika rehetra ka isan’izany ny Zandarimariam-pirenena.
mercredi, 14 décembre 2016 22:20
Mahajanga : Telo taona nanaovana asa soa ho an'ny mpiara-belona ny Assanati Famo Gidraka
Feno telo taona amin’ity taona 2016 ity ny fikambanana sosialy Assanati Famo Gidraka eto Mahajanga raha tamin’ny taona 2014 no nanomboka nijoro sy nanao asa soa ny fikambanana. Mitohy hatrany io asa fanampiana ny mpiara-belona ataon’izy ireo io, indrindra ireo olona hita fa sahirana ary maimaimpoana izany. Tanora no maro mivondrona ao anatin’ny fikambanana ary tsy eto Mahajanga ihany no ahitana azy fa misy koa ao Antananarivo.
mardi, 13 décembre 2016 22:40
Sambava : Voaheloka higadra 30 volana an-tranomaizina ilay tovolahy nanendaka ny mpanao gazetin’ny TVM
Handeha hamonjy fodiana ity mpanao gazetin’ny TVM Sambava ity no nisy nanendaka ny alin’ny 01 oktobra 2016. Efa izy hiditra ny trano fonenany ao Antaimby iny indrindra no nisy telo lahy nanendaka azy, ary ny namany izay nanatitra ilay mpanao gazety no tena voa mafy novelezin’ireo olon-dratsy biriky ka vaky ny loha ary niditra hopitaly. Ny ampitson'iny dia nametraka fitoriana teny amin'ny Polisy ireo niharam-boina. Nandeha ny fikarohana dia tratra ny iray tamin'ireo nanendaka ny 22 oktobra 2016 ary taorian’ny famotorana nataon’ny mpitandro filaminana dia natolotra ny Fitsarana ambaratonga voalohany tany Antalaha ity farany ity ka nidoboka amponja vonjimaika. Niakatra Fitsarana omaly ny raharaha, ka na dia niezaka mafy niaro ilay tovolahy aza ny mpisolovavany dia tsy nahazo fahafahana fa nomelohin’ny fitsarana higadra 30 volana an-tranomaizina sazy mihatra niampy onitra 3.600.000 Ariary. Voasambotra tamin’ny Alatsinainy heriny ihany koa ny namany faharoa ary efa miandry fitsarana any am-ponja vonjy maika fa ny fahatelo no mbola karohina.
dimanche, 11 décembre 2016 23:26
Augustin Andriamananoro : Nalaina an-keriny teo imason'ny fianakaviany
Vaovao nanamarika ity faran’ny herinandro ity ny fisamboran’ny Zandary an’i Augustin Andriamananoro. Teo ampandevenana ny havany akaiky ity minisitry ny fifandraisan-davitra sy ny paositra ary ny teknôlojia vaovao tamin’ny tetezamita sady filoha lefitry ny vondrona MAPAR ity no natao sambo-dokotra, tsy nisy akory taratasy na didy milaza izany teny ampelan-tanan’ireo iraka hisambotra, tsy nisy fampahafantarana an-taratasy azy na ny mpisolovavany fa dia notanterahina tsy misy valaka amin’ny fakana an-keriny “kidnapping” ny zava-nitranga teny Ambohijanamasoandro Itaosy ny sabotsy 10 desambra 2016. Kisendrasendra ihany koa sa nokendrena tamin’io 10 desambra io, izay andro natokan’ny Firenena Mikambana ho Andro iraisam-pirenena momba ny Zon’olombelona, ny nanatanterahana ny fisamborana an’i Augustin Andriamananoro ? Amin’izay indray koa niseho tao ankatoky ny tsingerintaona faha-6 nahaterahan’ny Repoblika faha-4, izay tsiahivina fa i Augustin Andriamananoro no filoha mpiara-mitantana ny Komity mpampandany ny ENY tamin’ny fitsapan-kevi-bahoaka nanovana ny Lalampanorenana nahatongavana tamin’izany.
jeudi, 08 décembre 2016 23:01
Mpiasa any Arabia Saodita : Vehivavy Malagasy iray maty omaly amin’ny fomba tsy mazava
Nodimandry tany Arabia Saodita ny alarobia 07 desambra 2016 tokony tamin’ny iray ora tolak’andro tany an-toerana i Ravaonantenaina Sylvana, 33 taona, teraka ny 27 oktobra 1983. Io alarobia io, tamin’ny 8ora alina, no nahazo hafatra milaza io vaovao ratsy io ny rainy, Paul Vincent izay monina any Amboangibe-Lokoho Sambava. Tamin’ny volana Septambra 2016 no nandray antso farany tamin’ny zanany izy sady nandefasany vola mitentina 4.135.779 Ariary mba hikarakarana ireo zanany miisa telo mianadahy izay 10 taona ny zandriny indrindra ary nanafaran’i Sylvana ny rainy hoe : « karakarao tsara ny zanako ry Dada ».
jeudi, 08 décembre 2016 12:34
Fitaterana : Ho 500 Ar ny sarandalan’ny taksibe eto Mahajanga
Efa andro vitsivitsy izay no nanao fampahafantarana amin’ny afisy ao anaty fiara ny mpitatitra fa hiakatra ho 500 Ar ny sarandalan’ny taksibe eto Mahajanga raha 400 Ar izany amin’izao. Noho ny fiarakan’ny vidin-tsolika no voalaza fa anton’io fampankarana io. Hihatra manomboka ny zoma 9 desambra io sarandalana vaovao io raha ny fampahafantarana. Fiakarana fanin-telony io tato anatin’ny roa taona. 300Ar, 400Ar ary izao ho 500Ar izao.
mercredi, 07 décembre 2016 09:58
Farafangana : Nafindra toerana vonjimaika ny toby fiantsonan’ny fiarakodia
Nanomboka omaly talata 6 desambra 2016 dia nisy fiovany ny toerana fiantsonan'ny taksiborosy eto Farafangana. Ho an'ny zotra mianatsimo mankany Vangaindrano dia vao hiditra ny tanàna avy Atsimo manamorona ny lalam-pirenena faha-12 ary eo am-piavina avy avaratra ho an'ny zotra nasionaly. Miaraka eo amin'ny fiantsonan'ny fiara mankany Vondrozo kosa ireo zotra mankany Manakara. Noho ny fanamboaran-dalana manoloana ny toby fiantsonan'ny fiara teo aloha no anton'izao fandaminana izao. Mbola tsy misy fotodrafitrasa amin'ireo toerana ireo satria lazaina fa vonjy maika ihany.
mardi, 06 décembre 2016 08:44
Seranan-tsambon’i Toamasina : Sarona ny tambajotra mpangalatra kojakojam-piarakodia
Teo ampianihana fefy sy teo am-pangalarana entana ny roa lahy no hita tamin’ny alalan’ny « caméra de surveillance » ka nosamborina. Ireo indray no nanoro ny namany, ka valo lahy izy ireo no voasambotra, ka mpiasa amina orinasan’ny tandapa iray nahazo tsenan’asa eo anivon’ny Seranan-tsambon’i Toamasina ny sasany amin’ireo. Ireo entan’olona anaty fiara vao tonga avy any ivelany, indrindra ireo kojakoja ho an’ny fiara vaventy sy Sprinter no tena lasibatra amin’izany. Nampidirina am-ponja vonjimaika izy valo lahy. Re anefa izao fa manao fanelanelanana amin’ny hamoahana ny mpiasany ilay tandapa.
lundi, 05 décembre 2016 22:25
Sary SOS Enfants
Valanaretina mandripaka any Befotaka : Maninona no tsy nalefa helikôptera ireo mpitsabo ?
Tamin’ny alakamisy 1 desambra 2016 no nandrenesana fa efa misy olona 12 matin’ny valanaretina hafahafa any amin’ny tanànan’Ambalarano, Kaominina Inosy, Distrika Befotaka, Faritra Atsimo Atsinanana. Ny ampitson’io dia re fa efa tafakatra 30 ireo namoy ny ainy. Androany ny solombavam-bahoaka voafidy tao Befotaka, Maroriky, dia nilaza fa 31 no namoy ny ainy, araka ny fampitam-baovao voarainy avy amin’ny zanaky ny Ben’ny tanàna Inosy. Nandefa iraka any an-toerana ny ministeran’ny fahasalamana, niala teto Antananarivo ny faran’ny herinandro teo, nandeha fiarakodia, hitsabo ireo marary ary hiady mba hanafoanana io valanaretina io. Rahampitso no tombanana ho tonga any amin’ny toerana nirongatan’ny valanaretina ireto iraka ireto.